Maqaalka Virginia Jacko ee Martech Zone |
Maqaallada by Virginia Jacko
Maamulayaasha bogagga ganacsiyada badan, yar iyo weyn, xilligan la soo dhaafay wuxuu ahaa jiilaalka niyad jabkooda. Laga bilaabo Diseembar, daraasiin farshaxanno farshaxan ah oo ku yaal magaalada New York ayaa loo magacaabay dacwadaha, iyo qolalka kaligood ma ahayn. Boqolaal dacwadood oo dacwado ah ayaa dhowaan laga gudbiyay ganacsiyada, hay'adaha dhaqanka, kooxaha u doodista iyo xitaa ifafaalaha caanka ah ee Beyonce, oo boggeeda internetka loogu magac daray dacwad-ficil heer sare ah oo la soo gudbiyay bishii Janaayo. Nuglaanta ay wadaagaan? Websaydhyadani ma ahayn